Ma Ma Hla Hla Khat Ywa Ywa
Uploaded by yaminmaunggyi
Way Lay Kaung Lay
Mama Hla Hla
မီးကြောင့်သင်မလောင်ပါစေနှင့် by (ဂျင်ကလိ @ achittatkatho.net)
Myanmar Phay Thar
REGISTRO2DE JOSÉ EMIR.docx
Esquema de Proyecto de Tesis Comunicación
NTP 339.077 Exudacion del concreto (2013).pdf
Ranking - TRT1 2014 - AnalistaeTecnico de TI - Expira Em 08/12/18
Notulen Sk Tentang Hak Menolak Pengobatan
AKU INGIN MENJADI ASISTEN PRAKTIKUM GEOFISIKA.docx
261683120 Askep Prolapsus Uteri(1)
Efectuar El Tratamiento de Agua Ácida de Mina
Miguel Es Inteligente
Transferencia de CaloreMassa Capitulo 1
မမလှလှခပ်ရွရွ Typed by –Kaungmyattun99(အချစ်တက္ကသိုလ်
မမလှလှ ခပ်ရွရွ ၊ ရေး - ချမ်မြေ့သာဇံမောင်မောင်နှံ
ဖွံ့ထွားကားစွင့် လုံးတစ်နေသော တင်သားအစုံပေါ်သို့ သန်မာသော လက်ဖဝါးနှစ်ခုက ဘယ်ညာပေါင်ထိပ်အပေါ်နားဆီမှ
ကျရောက်၍လာသည်.။ ခင်နွဲ့ရီ နောက်သို့ ပြုံးယောင်သန်းသော မျက်နှာလေးနှင့် သမင်လည်ပြန်
သံရှည်လေးနှင့် မူလိုက်စဉ် တင်သားအစုံပေါ်က လက်နှစ်ဖက်က ခင်နွဲ့ရီအားနောက်ကျောမှ နေ၍ သိုင်းဖက်လိုက်သည်..။
ခင်မောင်လွင်၏ မျက်နှာက ခင်နွဲ့ရီ၏ မျက်နှာဘေးသို့ ကပ်လိုက်ရင်း ပါးပြင်လေးတစ်ဖက်ကို အသံမထွက်အောင်
``ရီလေး…လာကွာ….တို့ တစ်ချီလောက် ဆွဲကြရအောင်….``
``ဟာကွာ…ကို ကလဲ..ခုမှ ဘယ်နှစ်ရက် ရှိသေးလို့လဲ…ရီလေး တင်ပါးကြီးတွေ ပိန်ကျသွားမှာပေါ့….``
ခပ်ချွဲချွဲ အသံလေးအဆုံး ခင်မောင်လွင်က သက်ပြင်းကို မျှင်းမျှင်းလေး ချလိုက်သည်.။
``အင်းပါ….နောက် နှစ်ရက် သုံးရက်လောက်နေမှ လုပ်ကွာ..နော်…ကိုကလဲ…..``
ခင်မောင်လွင် စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြင့် ခင်နွဲ့ရီကို သိုင်းဖက်ထားသော လက်အစုံကိ
ဖယ်ရှားရုတ်သိမ်းလိုက်သည်..။ ခင်နွဲ့ရီ နောက်သို့လှည့်၍ ခင်မောင်လွင်နှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်လိုက်သည်..။
``ကိုယ်ကလဲ…အိမ်ထောင်ကျတာ ၁၂ နှစ်ပဲ ရှိနေပြီ ဥစ္စာ..သားတောင်မှ ၆ တန်း ရောက်နေပြီ…မလျှော့သေးဘူး….``
ခင်မောင်လွင် ဘာမှ စကားပြန်မပြောမိ…။ သုန်သုန်မှုန်မှုန် ဖြစ်နေသော မျက်နှာကြီးနှင့် ခင်နွဲ့ရီကို ပြန်၍
``ကဲပါ…စိတ်ကောက်မနေပါနဲ့…နောက် ၃ ရက်….ဟုတ်လား…ရီလေး ကတိပေးပါတယ်….ကဲ…ရီလေး
..။ ဘေးမှ ခွေးခြေပေါ်သို့ ဈေးခြင်းတောင်းကို တင်လိုက်သည်.။ ခင်နွဲ့ရီကို တွေ့သော ယောက်ျားတိုင်းက သူမကို ငေး၍ မဆုံး....။ ခင်နွဲ့ရီ ထိုင်နေရာနှင့် ကောင်လေးထိုင်နေရာက ခပ်စောင်းစောင်းလေး.။ ဈေးသို့အသွား လမ်းတလျောက်၌ ယောက်ျားတွေက သူမကို စောင်း၍ တစ်မျိုး ငဲ့၍ တစ်ဖုံ ကြည့်ကြတော့ ခင်နွဲ့ရီ စိတ်ထဲ ပီတိ ဖြစ်မိသည်.။ လှမြဲ လှလျက်…။ ရင်းနှီးသူများက အပျိုတုံးကထက်ပင် ပို၍ လှလာသည်ဟု ပြောစမှတ် ပြုရသည်......။ ==================+=================+ ခင်နွဲ့ရီတို့နေတာက တောင်ဒဂုံ (………) ရပ်ကွက်တွင် ဖြစ်သည်.ဟုတ်လား…`` ``အင်း…….။ ခင်ပွန်းသည်က ရုံးတက် ၊ သားက ကျောင်းသွားဆိုတော့ မနက်ကို ရုံးချိန်ကျောင်းချိန် မှီအောင် ရပ်ကွက်ထဲက ပျံကျညနေ ဈေးလေးကိုပဲ အမြဲ သွားဝယ်လေ့ရှိသည်.။ ကောင်လေးက ရှိလှမှ ၁၈ ၊ ၁၉ ပေါ့....။ လက်ဘက်ရည်သောက်ရင်း ခင်နွဲ့ရီ၏ မျက်လုံးက ဘေးဘီသို့ ကစားလိုက်မိသည်...။ ခင်နွဲ့ရီမွေးလျင် သူမ၏ သားအရွယ်လောက်ပင် ရှိအုံးမည်.။ သူမကိုယ်ကို လည်း သူမ ဂရုစိုက်သူမို့ အလှအပတွေက အရာမယွင်း.net Page2..။ ခင်နွဲ့ရီကို ငမ်းကြသည်.။ ခင်နွဲ့ရီ၏ မျက်နှာလေးကတော့ ပန်းနုရောင်သန်းသွားသည်.။ ခင်မောင်လွင်က အသက် ၄၀ ထဲ ရောက်နေပြီ..။ ကောင်လေး၏ မျက်လုံးတွေက သူမရဲ့ တစ်ကိုယ်လုံးကို လွှမ်းခြုံထားသည်..။ ကြည့်ပါအုံး…အသားဖြူဖြူ အရပ်ရှည်ရှည် ခပ်ချောချော ကောင်လေးတစ်ယောက် လက်ဘက်ရည်ဆိုင်ရှေ့နားက ကွမ်းယာဆိုင်ပေါ်မှနေ သူမကို အငမ်းမရ စူးစူးရဲရဲ စိုက်ကြည့်နေသည်.။ နေ့တိုင်း ဒီကွမ်းယာဆိုင်မှာ လာ၍ ထိုင်နေတာ တွေ့ရသည်..။ အနားမှာ ယောက်ျားဖြစ်သူ ပါတာတောင်မှ အရေးမထားကြ..။ သူမ သားရဲ့ သူငယ်ချင်း၏ အစ်ကို ဇေယျာ ဆိုသောကောင်လေး ဖြစ်သည်.။ ``ဟင်……….။ ပျံကျဈေးလေးထိပ်ဖက်နားတွင် ရှိသော လက်ဘက်ရည်ဆိုင်သို့ ရောက်လျင် လက်ဘက်ရည်ကြိုက်သော ခင်နွဲ့ရီတစ်ယောက် လမ်းမအစပ်တွင် ရှိသော စားပွဲတွင် ထိုင်၍ လက်ဘက်ရည်သောက်သည်..`` ခင်မောင်လွင် မလှမ်းချင်လှမ်းချင် ခြေလှမ်းများဖြင့် ကျောခိုင်း၍ ထွက်သွားတော့မှ ခင်နွဲ့ရီက မှန်တင်ခုံရှေ့ လှမ်းလာပြီး အလှပြင်တော့သည်..မမလှလှခပ်ရွရွ Typed by –Kaungmyattun99(အချစ်တက္ကသိုလ်) ဈေးသွားအုံးမယ်…ကိုက ဒီနေ့ အလုပ်နားတော့ သားကို ကျူရှင် သွားကြိုပေး.၊ ကလေးတစ်ယောက်အမေဆိုပေမယ့် မျိုးရိုးကြောင့်လားမသိ.....။ ဒီကောင်လေး ဘယ်သူဆိုတာ ခင်နွဲ့ရီ ကောင်းကောင်းသိသည်.`` အသံလေးကတော့ လည်ချောင်းဝတွင် ပျောက်သွားသည်.။ ဈေးသို့ ထွက်လာတော့ ညနေ ၅ နာရီ လောက်ရှိ်ပြီ.။ ခင်နွဲ့ရီက ၃၅ နှစ်..။ http://achittatkatho.။ ခင်နွဲ့ရီက လုံးဝ ကျမသွား.
..။ ဇေယျာက ခင်နွဲ့ရီ၏ တစ်ကိုယ်လုံးကို ဘေးလူများ မသိအောင် ဖြတ်ခနဲ ကြည့်သည်.`` ``အင်း…..။ ဘေးရှိ ခွေးခြေပေါ်တွင် တင်ထားသော ဈေးခြင်းတောင်းက သူမ၏ အောက်ပိုင်းကို ကွယ်ထားသလို ဖြစ်နေသည်..။ ခင်နွဲ့ရီ ကောင်လေးဖက်သို့ ဖြတ်ခနဲ ကြည့်လိုက်တော့ သူမကို စူးရဲစွာ ကြည့်နေသော ဇေယျာနှင့် မျက်လုံးချင်း ဆုံမိသည်.သား…မှာလိုက်မယ်…`` ``ဟင့်အင်း..`` ``နေကောင်းတယ်.`` ခင်နွဲ့ရီ၏ အသံတွေက မူမှန်မဟုတ်ကြောင်း သူမကိုယ် သူမ သိနေသည်.....သား …..သောက်ပြီးပြီ…..။ ``လာလေ..။ http://achittatkatho.။ အထူးသဖြင့် ခင်နွဲ့ရီ၏ ဖွံ့ဖွံ့ထွားထွား ရင်သားအစုံကို အကြည့်များသည်.အမေလဲ ညီလေးနဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေတယ်….။ ကောင်လေးကလဲ ခပ်ရဲရဲ ပင် ဝင်၍ ထိုင်လိုက်သည်.ထိုင်လေ.လေ…`` ``ဟင့်အင်း…မသောက်တော့ဘူး.`` ခင်နွဲ့ရီက သူမဘေးရှိ စောစောက ဈေးခြင်းတောင်း တင်ထားသော ခွေးခြေခုံကို ထိုးပေးသည်.အန်တီရဲ့….အန်တီ…`` ``သား….။ ခင်နွဲ့ရီ ၏ ရင်တွေ တဒိန်းဒိန်း ခုန်လာသည်.net Page3..။ ပြီးတော့ မသိချင်ယောင်ဆောင်ကာ လက်ဘက်ရည်ကို ဇိမ်ခံ၍ အချိန်ဆွဲ သောက်နေသည်..။ ``မင်း အမေရော နေကောင်းရဲ့ လား….။ ခင်နွဲ့ရီ မသိချင်ယောင် ဆောင်နေသော်လည်း ကောင်လေးနှင့် နီးနီးကပ်ကပ် ထိုင်နေရသည်ဖြစ်၍ မနေတတ်မထိုင်တတ် ဖြစ်လာရသည်.။ ဇေယျာ ထိုင်နေရာမှ ထ၍ သူမဆီသို့ ဦးတည်လျှောက်လာသည်...ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ…`` ခင်နွဲ့ရီ သူမကိုယ် သူမ အံ့သြမိသည်..မမလှလှခပ်ရွရွ Typed by –Kaungmyattun99(အချစ်တက္ကသိုလ်) ``ဟင်…ငါ….လက်ဘက်ရည်သောက်ပါလား….အန်တီ....၊ မတွေ့တာတောင် ကြာပြီ…..လက်ဘက်ရည်သောက်အုံး…...။ ထိုအခိုက် ခင်နွဲ့ရီ ပြုံးပြလိုက်ပြီး မျက်လွှာချကာ ရေနွေးကြမ်းကို ငှဲ့၍ သောက်နေလိုက်သည်.။ ကိုယ့်သားလောက်ရှိသော ကောင်လေး၏ အကြည့်ကြောင့် အပျိုဖြန်းလေးလို သူမ ရင်တွေ ခုန်နေသည်.။ ဈေုးခြင်းတောင်းကို ယူ၍ မြေကြီးပေါ်သို့ ချလိုက်သည်..။ ကောင်လေး အနားရောက်လာတော့ ခင်နွဲ့ရီ မော့ကြည့်လိုက်သည်.
။ ခင်နွဲ့ရီ ဘေးဘီသို့ မျက်လုံးကစားရင်း ရှာကြည့်သည်..။ ××××××××××××××××××----××××××××××××××××××××××× နောက်တစ်နေ့တွင် မနက်ပိုင်း တစ်ကြိမ် ၊ နေ့လည်ပိုင်း တွင် တစ်ကြိမ် ဇေယျာဆိုသော ကောင်လေး အိမ်ရှေ့မှ စက်ဘီးနှင့် ဖြတ်ရင်း အိမ်ဖက်သို့ လှည့် လှည့်ကြည့်သွားသည်ကို ခင်နွဲ့ ရီ တွေ့လိုက်ရသည်.။ ဝယ်စရာရှိသည်များ ဝယ်ခြမ်းပြီးသောအခါ ခင်နွဲ့ရီ မျက်လုံးကစားကြည့်တော့ ဇေယျာဆိုသော ကောင်လေး ဈေးတစ်ဖက်ထိပ်နားတွင် မယောက်မလည်နှင့် ရပ်၍ သူမကိုပဲ......။ ဇေယျာများ လာအုံးမလားဟု လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွင် ခါတိုင်းထက် ပို၍ ကြာကြာလေး ထိုင်နေမိသည်…။ မှောင်ရီပျိုးလာတော့မှ ခင်နွဲ့ရီ ဈေးတန်းထဲ လျှောက်လာပြီး ဈေးဝယ်သည်...။ တချို့ဆိုင်လေးတွေဆို သိမ်းဖို့ပင် ပြင်နေကြပြီ…။ ခင်နွဲ့ရီ စိတ်ထဲ အတော်ပင် မနေတတ် မထိုင်တတ် ဖြစ်နေသည်…။ ဝယ်ရင်းခြမ်းရင်း ဈေးတန်းအလယ်လောက်ရောက်တော့မှ…ဟင်..နော်…သား…`` ``ဟုတ်ကဲ့…..။ ခင်နွဲ့ရီ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ရောက်တော့ ဇေယျာက သူမသောက်နေရာစားပွဲဘေးရှိ စားပွဲတွင် ဝင်ထိုင်ကာ လက်ဖက်ရည် မှာသောက်သည်..။ ခင်နွဲ့ရီ လက်ဘက်ရည်ဖိုးရှင်းကာ ဈေးတန်းဖက်သို့ လျှောက်လာပြီး ဈေးဝယ်သည်.ခနဲဖြစ်ကာ ခင်နွဲ့ရီ ရင်ထဲမှာ ဖိန်းရှိန်းသွားသည်.။ မတွေ့ရ…။ ဈေးတန်းဖက်သို့ လှမ်း၍ ကြည့်သည်…။ ကောင်လေးကို မတွေ့ရ…။ ခင်နွဲ့ရီ နေမထိ ထိုင်မထိ ဖြစ်လာရသည်.။ ခင်နွဲ့ရီ သက်ပြင်းတစ်ချက် ချပြီး ဈေးမှ ပြန်ခဲ့လေသည်....ကွက်ကြည့်ကွက်ကြည့် လုပ်နေသည်ကို တွေ့လိုက်ရသည်..။ ဈေးထဲတွင်ပင် လူအတော်ရှင်းနေချေပြီ…..net Page4.မမလှလှခပ်ရွရွ Typed by –Kaungmyattun99(အချစ်တက္ကသိုလ်) ``ကဲ…အန်တီ ဈေးဝယ်လိုက်အုံးမယ်…...။ ပြီးမှ သူမကိုယ် သူမ သတိထားမိတော့ ဇေယျာရှိရာနှင့် မလှမ်းမကမ်း တဖက်ဈေးထိပ်နားပင် ရောက်လို့နေပြီ….။ ဇေယျာက ဈေးတစ်ဖက်ထိပ် လမ်းဘေးတွင် ဆောင့်ကြောင့်လေးထိုင်၍ သူမရှိရာဖက်သို့ ငေးကြည့်နေသည်..။ နောက်တစ်နေ့တွင်လည်း ထိုနည်းတူပင်…။ ×××××××××××××××××---××××××××××××××××××××× လေးရက်မြောက်သောနေ့တွင်တော့ ခင်နွဲ့ရီ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်သို့ ရောက်တော့ ဇေယျာ့ကို မတွေ့ရ.။ သူတို့နှစ်ယောက် ဘေးမှ လူတွေအလစ်တွင် တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် မျက်လုံးချင်းဆိုင် ကြည့်မိလိုက် ပြုံး၍ ပြလိုက်ကြနှင့် နှစ်ယောက်စလုံး၏ ရင်ထဲတွင်တော့ တစုံတခုကို သိနေသလို ခံစားနေရလေသည်..။ ခင်နွဲ့ရီ သတိလက်လွတ်ဖြစ်ကာ ဇေယျာရှိရာသို့ ဦးတည်၍ လျှောက်လှမ်းသွားမိသည်...။ ညနေဈေးထွက်တော့ ခါတိုင်းထက်ပို၍ ခင်နွဲ့ရီ အလှပြင်မိသည်.။ ကြည့်လိုက်တော့ ဈေးထိပ်ဆုံးတွင် ရောက်နေပြီး သူမ၏ ရှေ့တွင် ပီနံအိတ်လေးခင်း၍ ကြက်သွန်လေးတွေ ပုံ၍ ရောင်းနေသော အဖွားကြီး တစ်ဦး…။ http://achittatkatho.။ ခင်နွဲ့ရီ ကိုယ်ရှိန်သပ်၍ ရပ်လိုက်သည်.သားလဲ ဟိုဖက် ခဏလျှောက်လိုက်အုံးမယ်…`` ကောင်လေးက အရင်ထ၍ ဈေးတန်းဘက်သို့ ထွက်သွားသည်.
.။ နဖူးမေးတင်၍ ငုံ့ကြည့်နေသော ခင်နွဲ့ ရီသည် ပုဆိုးထဲမှ တဆတ်ဆတ် တောင်ထနေသော လီးကြီးကို တစိုက်မတ်မတ် ကြည့်နေမိသည်..။ အမှန်တော့ အိမ်တွင် ကြက်သွန် က တစ်ပိဿာလောက် ဝယ်ထားပြီးသား ရှိသည်...။ ဓါတ်မီးတိုင် တစ်တိုင်လောက်အကွာတွင် လမ်းဘေး၌ ပေါက်နေသော ကျူမြက်ရုံတွေ ရှိသည်.။ ဇေယျာကလည်း သွက်သည်..။ ဈေးတန်းထဲတွင် လူလဲ အတော်ရှင်းနေပြီ….ဟုတ်…ဟုတ်ကဲ့….။ခင်နွဲ့ရီပုံစံက ဘာဝယ်စရာ ကျန်သေးလဲဟု ရပ်ပြီး စဉ်းစားနေတဲ့ ပုံ…။ ဈေးဆိုင်တွေ သိမ်းဖို့ပြင်နေကြပြီ..။ ပါးနှစ်ဖက်ကို နမ်းပြီးသွားတော့ ခင်နွဲ့ရီ၏ မျက်နှာကို သူ့ပခုံးတစ်ဖက် နှင့် မှေးထားလိုက်ရာ ခင်နွဲ့ရီက ဇေယျာ့ ပုခုံးကို သူမနဖူးနှင့် မှေးတင်၍ အောက်သို့ ငုံ့ကြည့်လိုက်သည်…။ ဇေယျာက ကျန်လက်တစ်ဖက်ဖြင့် ခင်နွဲ့ရီ၏ နို့အုံတစ်ဖက်ကို အုပ်ကိုင်၍ ဖျစ်ညှစ်ကာဆွဲသည်...။ ခင်နွဲ့ရီ၏ လည်ပင်းကို လက်တစ်ဖက်ဖြင့် လှမ်း၍ ဆွဲယူဖက်လိုက်ပြီး ပါးနှစ်ဖက်ကို အငမ်းမရ နမ်းလိုက်သည်..။ ဇေယျာဘက်သို့ တစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်ပြန်သည်.`` ``တစ်ပုံကို တစ်ရာပါ…..။ သူတို့ကို မမြင်နိုင်...။ သူမကို ကြည့်နေသော ဇေယျာကို ကျူမြက်ရုံတွေ ရှိရာသို့ မေးငေါ့ပြသည်.ဘယ်လိုရောင်းလဲ….။ မြက်ရုံတွေနား ရောက်တော့ ဇေယျာက မြက်ရုံတစ်ရုံအတွင်းနားတွင် ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ပြီး သူမကို ကြည့်နေသည်.`` ခင်နွဲ့ရီ ဇေယျာကို လှမ်းကြည့်လိုက်သည်.`` ``တစ်ပုံပေးပါ….။ သူမကို ဂရုစိုက်ကြည့်နေသူ တစ်ယောက်မှ မရှ.မမလှလှခပ်ရွရွ Typed by –Kaungmyattun99(အချစ်တက္ကသိုလ်) ``အဖွား…...။ ခင်နွဲ့ရီ တစ်ကိုယ်လုံး အပျိုမလေးသဖွယ် ဖျန်းခနဲ ကြက်သီးတွေ ထသွားသည်...။ http://achittatkatho.။ ခင်နွဲ့ရီ သုတ်ခနဲ လျှောက်ကာ ကျူမြက်ရုံတွေဆီသို့ သွားသည်..`` ကြက်သွန်ထုတ်ကို ယူပြီး ဈေးခြင်းတောင်းထဲ ထည့်လိုက်သည်....ိ ..။ ခင်နွဲ့ရီ ဖြတ်ခနဲ ကျူမြက်ရုံထဲ လှမ်းဝင်ကာ ဇေယျာ့ ရှေ့တွင် ဆောင့်ကြောင့် ထိုင်ချလိုက်သည်.။ အနားတွင် အိမ်တွေက ကျဲသည်.။ ပြီးတော့ ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှ ငွေတစ်ရာထုတ်၍ အဖွားကြီးကို ပေးလိုက်ပြီး ဈေးတန်းထဲသို့ လှည့်ကြည့်လိုက်သည်.။ ခင်နွဲ့ရီနေရာတွင်ပင် ရပ်ပြီး လမ်းဘေးနှစ်ဖက်ရှိ ဈေးဆိုင်များကို တစ်ဆိုင်ချင်းနီးပါး စေ့စေ့စပ်စပ် ကြည့်သည်...။ ခင်နွဲ့ရီ ရပ်လိုက်ပြီး လမ်းသွားလမ်းလာ ရှင်းမရှင်း ခဏကြည့်လိုက်ရာ အသွားအလာ တစ်ယောက်မှ မရှိ..။ ပြီးတော့ သူမခပ်လှမ်းလှမ်းသို့ တစ်ချက် လှမ်းကြည့်သည်.။ ``ဒီမှာ…ကြက်သွန်လေ…တူမ….တူမကြီး….net Page5..။ ဇေယျာ သူ့နောက်သို့လှည့်ကြည့်ပြီး ချက်ချင်း သဘောပေါက်ကာ ထပြီး ကျူမြက်ရုံတွေ ရှိရာသို့ လျှောက်သွားသည်.။ ဇေယျာက ခင်နွဲ့ရီကို လှမ်း၍ ဖက်ကာ ဆွဲယူလိုက်ရင်း ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်နေရာမှ ဒူးထောက်လျက်သား ဖြစ်သွားတော့ သူ့ပုဆိုးထဲမှ တောင်ထနေသော လီးကြီးက ခင်နွဲ့ရီ၏ ပေါင်တန်ကို ထိုးထောက်မိနေသည်.`` ``အော်….
.။ ခင်မောင်လွင်က သူမကို နောက်မှ သိုင်းဖက်လိုက်သည်...။ ခင်နွဲ့ရီ၏ ထဘီနောက်တွင် လက်သီးဆုပ်ခန့် စို၍ ကွက်နေသည်ကိုတော့ ဘယ်သူမှ မသိသလို ရပ်ပြီး ကျန်နေခဲ့သော ဇေယျာမှာလည်း သူ့လီးကြီးကို ပုဆိုးပေါ်မှ အုပ်ကိုင်ရင်း အသက်ရှူသံတွေ ပြင်းကာ ကျန်ခဲ့လေသည်..။ ပြီးတော့ သူ့ဟာကြီးက ပေါင်ထိပ်ကို ဟိုထောက်သည်ထောက်နဲ့ အတော်ကြီးကို သန်မာတာပဲ…။ ``တော်…..။ ================++++++============== ခင်နွဲ့ရီနှင့် ဇေယျာတို့ ညနေတိုင်း လမ်းဘေးကျူမြက်ရုံတွင် တွေ့နေခဲ့သည်မှာ လေးရက်ခန့် ရှိခဲ့ချေပြီ.မမလှလှခပ်ရွရွ Typed by –Kaungmyattun99(အချစ်တက္ကသိုလ်) ခင်နွဲ့ရီ၏ နို့ကြီးတစ်လုံးကို ဇေယျာက ဖျစ်ညှစ်နေရင်း ပါးတစ်ဖက်ကိုလည်း ရှိုက် ရှိုက်နမ်းသည်.net Page6.။ ``ဘယ်လိုလဲ…ဟင် ရီလေး….။ သုံးမိနစ်မျှသာ ကြာသည်.`` ဇေယျာ ခင်နွဲ့ရီကို လွှတ်ပေးလိုက်သည်.....။ အင်္ကျီလုံချည်တွေ ဆွဲဆန့်ရင်း လက်တစ်ဖက်က ဈေးခြင်းတောင်းကို ကိုင်ကာ ခပ်သွက်သွက် ထွက်ခဲ့သည်..`` http://achittatkatho.။ ခင်နွဲ့ရီ ဇေယျာ၏ မျက်နှာလေးကို ကြည်ကြည်နူးနူးလေး ကြည့်ရင်း ပါးတစ်ဖက်ကို ရွှတ်ခနဲ လှမ်းနမ်းလိုက်ပြီး ကျူမြက်ရုံထဲမှ လမ်းပေါ်သို့ လှမ်း၍ တက်လိုက်သည်.ကွာ.။ ခင်နွဲ့ရီ အိမ်သို့ ပြန်ရောက်တိုင်း မနေတတ် မထိုင်တတ်ကြီး ဖြစ်နေရပြီး စဉ်းစားမိတိုင်း စောက်ရည်ကြည်တွေက စိမ့်စိမ့်ထွက်လာတတ်ကြသည်....။ ``ရီလေး….။ ဘေးဘီသို့ ကြည့်လိုက်တော့ ဘယ်သူမှ မရှိ.။ သန်လိုက်တဲ့ ကောင်လေး…။ ခင်နွဲ့ရီ အသက်ရှူမရလောက်အောင် ဖြစ်သွားသည်.။ ``ကိုယ့်သဘောပဲ…လေ….`` အမျိုးမျိုး အကြောင်းပြကာ ရှောင်လွှဲနေရတာ ဒီနေ့တော့ ဘယ်လိုမှ ရှောင်လို့မရတော့မှန်း ခင်နွဲ့ရီ သိလိုက်သည်.`` တိုးတိုးလေးပြောပြီး…ခင်နွဲ့ရီ မတ်တတ်ထရပ်လိုက်တော့ ဇေယျာက လည်း ဆတ်ခနဲ ထရပ်လိုက်ပြီး ခင်နွဲ့ရီ ကိုယ်လုံးကို ဆွဲဖက်လိုက်သည်.။ ဘာမျှ မကြာ...ပြီ ကွယ်……....။ ဇေယျာ အသက်ရှူသံကလည်း တရှူးရှူးပြင်းထန်နေသည်.ညကျရင်နော်….`` ခင်မောင်လွင့် အသံကြောင့် ခင်နွဲ့ရီ နောက်သို့ လှည့်ကြည့်သည်.။ ဒီလိုခံစားနေရတာကိုပဲ ခင်နွဲ့ရီ သာယာနှစ်ခြိုက်နေမိသည်.။ ``တော်ပြီ...နော်…...။ ခင်နွဲ့ရီတစ်ကိုယ်လုံး ဖိန်းရှိန်း၍ တုန်ခိုက်နေသည်...
..။ အမှန်တော့ စောစောက ဇေယျာနဲ့ တွေ့ခဲ့တာတွေ စဉ်းစားမိကာ အရည်ကြည်လေးတွေ စိမ့်ထွက်နေခြင်း ဖြစ်သည်.။ ကလေးတစ်ယောက်အမေဖြစ်သော်လည်း ခင်နွဲ့ရီ၏ နို့အုံထွားထွားတွေက ပုံပျက်မသွား ၊ လျော့တိလျော့ရဲ တွဲမနေ…။ တင်းတင်းမာမာဖြင့် အလုံးမပျက် လှနေဆဲ ဖြစ်၍ တစ်ထပ်တည်း ဝတ်၍ ကြည့်ကောင်းသည်...။ ဝတ်ရင်း ခင်နွဲ့ရီ၏ မျက်နှာလေး ဘာစဉ်းစားမိသည် မသိ နီရဲသွားသည်.သူ့မီးက လာတယ်မို့လား….။ ပြီးတော့ ကလေး အမေလည်း ဖြစ်၍ လူအမြင် မတင့်တယ်စရာမရှိ..ကိုယ့်ယောက်ျားကို လတ်လတ် ဆတ်ဆတ် စားစေချင်လို့ ….net Page7.။ ``ဟာ….နှစ်ရက်စာလောက် ဝယ်ပြီး ရေခဲသေတ္တာထဲ ထည့်ထားလိုက်ပါလား… ရီလေး သွားရလာရတာ ပင်ပန်းတာပေါ့…..မမလှလှခပ်ရွရွ Typed by –Kaungmyattun99(အချစ်တက္ကသိုလ်) ``အင်း……`` ခင်မောင်လွင်သည် ခင်နွဲ့ရီကို နောက်မှ ဖက်ထားရင်း ပါးကို ငုံ့နမ်းပြီး လက်က ခင်နွဲ့ရီ၏ တင်ပါးကြီးများ ၊ ပေါင်တံကြီးများ ကို ပွတ်သပ်ဖျစ်ညှစ်၍ ကိုင်ရင်း ပေါင်နှစ်လုံးကြားသို့ ထိုးနှိုက်လိုက်သည်...`` ``ဟဲဟဲ…. ``သားနဲ့ ကို ဈေးလိုက်ကြအုံးမလား…….။ ``ကဲပါ…ကိုရယ်…ဖယ်အုံး ညကျမှ တွေ့တာပေါ့… ရီလေး ဈေးသွားဖို့ ပြင်လိုက်အုံးမယ်….အရည်လေးတွေ ထွက်နေတယ်…`` ``အို့…ကိုက ဒီလောက်တောင် ဖက်ပြီး ကိုင်နေတာ မထွက်ပဲ နေမလား…လို့…`` ခင်နွဲ့ရီ နောက်သို့ လှည့်လိုက်ပြီး ခင်မောင်လွင်နှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်ကာ ခေါင်းကို ခင်မောင်လွင့် ရင်ခွင်ထဲတိုးဝင်သည်..ဒါမှ အားရှိမှာ….ဟုတ်ဖူးလား….။ အိမ်ပေါက်ဝ ရောက်မှ စိတ်ထဲ မလုံသည်မို့ …..ကွယ်…`` ``ဟွန်း….`` http://achittatkatho.။ ပြီးတော့ ဘရာစီယာ ဝတ်မည်လုပ်ပြီးမှ မဝတ်တော့ပဲ တီရှပ်တစ်ထည်ကို ခေါင်းမှ စွပ်၍ တစ်ထပ်တည်း ဝတ်လိုက်သည်..ရီလေး…...`` ``ရီလေးကလဲကွာ….ဟုတ်ပါတယ်…ဟုတ်ပါတယ်…`` ဈေးသွားဖို့အတွက် ခင်နွဲ့ရီ စိတ်တိုင်းကျ အလှပြင်နေမိသည်.။ သူမဈေးသွားတော့ အချိန်က မှောင်ရိပ်သန်းနေပြီ…။ ခင်နွဲ့ရီ ပြင်ဆင်ပြီး ဈေးခြင်းတောင်း ဆွဲ၍ ထွက်သည်...
.....။ ခင်မောင်လွင်က ဖက်ရုံသာမဟုတ်.။ ရှင်းသန့်လှသော လူပျိုလီး…။ ဒစ်ပင် မပြုတ်သေး…။ အသာလေး လက်ဖြင့် အုပ်ကိုင်ကာ ပွတ်ပေးသည်.။ ပြီးတော့ လီးကို ပုဆိုးပေါ်မှပင် အသာကိုင်၍ ပွတ်ပေးပြန်တော့ ဇေယျာက သူမကို အတင်းတိုး၍ ဖက်ပြီး နို့ကိုင်တာတွေက ကြမ်းလာသည်....။ လီးကြီးက ဆတ်ခနဲ ..မီးလာတုန်း..။ ပြီးတော့ ခင်နွဲ့ရီ၏ နို့တွေကို ကိုင်ဆဲကွာ ဖျစ်ညှစ်တော့ ဘရာစီယာ ခံဝတ်ထားသည်နှင့် မတူပဲ တီရှပ်တစ်ထပ်တည်းသာ ဝတ်ထားသဖြင့် အကိုင်ခံရသော ခင်နွဲ့ရီ နှင့် ကိုင်နေသော ဇေယျာတို့မှာ အသားချင်းထိကာ ကိုင်ရသလို အရသာတွေ့လှသည်.မေမေ သွားတော့မယ်.။ ခင်နွဲ့ရီက သူ့ရှေ့သို့အရောက် ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ချလိုက်သည်နှင့် ဇေယျာက လှမ်းပြီး ဖက်ကာ နမ်းသည်.။ လီးထိပ်အပေါက်လေးမှ အရည်လေးတွေ စို့ထွက်လာသည်.မမလှလှခပ်ရွရွ Typed by –Kaungmyattun99(အချစ်တက္ကသိုလ်) ``သားတော့ မလိုက်ချင်ဘူး….net Page 8 .အင်း………....`` အိပ်ယာပေါ်တွင် ပက်လက်လှန်၍ အိပ်နေသော ခင်နွဲ့ရီကို ကြုံး၍ ဖက်လိုက်သဖြင့် ခင်နွဲ့ရီ လန့်သွားပြီး ပြောလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်.......ခုမှ ရှစ်နာရီလောက်ပဲ ရှိသေးတာ…`` ``ရီလေးကလဲ…ကွာ…သားလည်း အိပ်သွားပြီပဲ….ကို.မောင်….မေမေ…`` ``ဒါဆို ….။ ခင်နွဲ့ရီ အရသာ တွေ ပိုတွေ့လာသည်.။ အင်း…ခုမှ ငယ်ငယ်လေး ရှိသေးတာပဲ …ဆက်ပြီးထွားလာမှာပေါ့…ဟု တွေးကာ မေးသိုင်းကြိုးနေရာကို လက်မလေးဖြင့် ဖွဖွလေး ဖိကာ ပွတ်ပေးလိုက်သည်.`` ပြောလဲပြော လီးကြီးကို လက်ဖြင့် တအားဆုပ်ညှစ်လိုက်ပြီး ခင်နွဲ့ရီ မတ်တတ်ထရပ်လိုက်သည်.။ ပြီးတော့ အဝတ်အစားတွေကို ပြန်၍ စန့်ရင်း အပြန်လမ်းသို့ လှမ်းခဲ့သည်.။ ဇေယျာ တွန့်ခနဲ ဖြစ်သွားသည်.။ အရှည်ကတော့ အတူတူလောက်ပင်...။ ဇေယျာ၏ ပုဆိုးခါးပုံစကို ဆွဲဖြုတ်ချလိုက်တော့ လီးက ထောင်ခနဲ ထွက်လာသည်..။ ----------------------×---------------------×-------------------------``ကို…ကလဲကွာ…အစောကြီး ရှိသေးတယ်လေ…..။ ခင်နွဲ့ရီက သူမ၏ နဖူးကို ဇေယျာ၏ ပခုံးပေါ် မှေးတင်၍ အကိုင်ခံနေရင်းက ဇေယျာ၏ ပုဆိုးထဲမှ ထောင်ထနေသော လီးတန်ကြီးကို လက်ကလေးဖြင့် လှမ်း၍ အသာအုပ်ကိုင်လိုက်သည်.။ ဇေယျာ့ လီးမှာ သူမယောက်ျား ခင်မောင်လွင်၏ လီးလောက် မကြီး.နော….`` ဈေးထွက်လာသော ခင်နွဲ့ရီ ရင်ထဲတွင် ခါတိုင်းနေ့တွေလိုပင် ရင်တွေ တဒိန်းဒိန်း ခုန်နေသည်.ဗန်ဒိန်း ကားဆက်ကြည့်လိုက်အုံးမယ်…..။ ထုံးစံအတိုင်း ဇေယျာက ကျူမြက်ရုံထဲတွင် စောင့်နေသည်.။ ခင်နွဲ့ရီက ညနေက ဇေယျာနှင့် ကိစ္စကို စားမြုံ့ပြန်နေခြင်း ဖြစ်သည်.ဆတ်ခနဲ ရုန်းနေသည်..။ ``တော်ပြီ…နော်….။ လက်နှစ်ဖက်က ခင်နွဲ့ရီ၏ တစ်ကိုယ်လုံးအနှံ့ကို ကိုင်နေပြီး မျက်နှာက ခင်နွဲ့ရီကို http://achittatkatho..ရီလေး သွားပြီ……`` ``အင်း….
။ ဒါပေမယ့် သူက ခင်နွဲ့ရီရဲ့ လင်.။ မခံ၍ မဖြစ်...အ….`` ခင်မောင်လွင် ပက်လက်လှန်လိုက်တော့ သူမက ပုဆိုးကို ဆွဲ၍ ချွတ်လိုက်သည်..။ သူမဝတ်ထားသည်က ရှပ်အင်္ကျီ လက်တိုလေး တစ်ထပ်တည်းမို့ ရင်ဘတ်က အင်္ကျီ ကျယ်သီးတွေ ကို ဖြုတ်ပြီး နို့နှစ်လုံးကို ဖော်ပေးလိုက်သည်.။ ``ကိုယ်….ဒီတိုင်းပဲ…လုပ်တော့..။ ခင်နွဲ့ရီ မခံချင်...`` ``ရီလေးလဲ ကိုယ့်လိုပဲ……ကွယ်…`` ပြောရင်း အိပ်ယာပေါ်သို့ ခင်နွဲ့ရီက ပက်လက်လှန်ချလိုက်သည်..။ ``ကဲ…ပါ….။ အတော့်ကို စိတ်ထနေပုံရသော ခင်မောင်လွင်က ခင်နွဲ့ရီ၏ ပေါင်နှစ်ချောင်းကို ထောင်၍ ဒူးထောက်ဝင်လိုက်ပြီး လီးကို တေ့ကာ လျှောခနဲ သွင်းလိုက်သည်..။ ခင်မောင်လွင် လီးကို တဆုံးသွင်းထားရင်း ခင်နွဲ့ရီကို တစ်ချက်ကြည့်ကာ.။ မခံ၍ မဖြစ်တော့…။ သူ့ကို မြန်မြန် ပြီးအောင် လုပ်မှပဲ…။ ငါ သူနဲ့ မပြီးချင်ဘူး.ကို……..။ နှုတ်ခမ်းချင်း ခွာလိုက်တော့ ခင်မောင်လွင် ကြုံး၍ ထသည်.။ ပထမ တစ်ချက်နှစ်ချက် ခပ်ဖြေးဖြေး ဆောင့်လိုက်ပြီး သည်နှင့် မနားတမ်း ဒရစပ် ဆောင့်လိုးတော့သည်..ပြီးတောင် ပြီးချင်နေပြီ…ကွာ…...။ ထောင်းခနဲ ထွက်လာသော လီးကြီးက ထိပ်ကြီး နီရဲနေသည်...။ မိန်းမတော်တော်များများ၏ အတွေးအခေါ်အတိုင်း ခင်နွဲ့ရီ သုံးပစ်လိုက်သည်....။ ခင်မောင်လွင်က သူမ၏ လင်ဆိုတော့လဲ တာဝန်ကျေရပေမည်.`` ခင်နွဲ့ရီက ဝတ်ထားသော ထဘီကို ခါးထိလှန်တင်ပေးသည်...။ ``အ…..။ သူမ၏ မျက်စိထဲ ဇေယျာ့ လီးကြီးက မထွက်. ``ရီလေးက ခလေးတစ်ယောက်မွေးခဲ့ပေမဲ့ ဗိုက်ကြောတွေ ပြတ်မနေတော့ ငါကံကောင်းတာပဲ…`` ဟုတွေးပြီး ခင်နွဲ့ရီ ကိုယ်ပေါ်သို့ မှောက်ချလိုက်ကာ နို့တစ်လုံးကို ဆွ၍ဲစို့ရင်း ဖင်ကြွပြီး ဆောင့်လိုးလိုက်သည်.။ ခင်မောင်လွင့် လက်တစ်ဖက်က ခင်နွဲ့ရီကို ဖက်ထားပြီး လက်တစ်ဖက်ကနို့ကို လှမ်းဆွဲနယ်သည်.ပက်လက်လှန်လိုက်…..မမလှလှခပ်ရွရွ Typed by –Kaungmyattun99(အချစ်တက္ကသိုလ်) နမ်းသည်.။ ခင်နွဲ့ရီက စောက်ခေါင်းထဲ ဝင်လာသော လီးကို စောက်ပတ်အတွင်းမှ ညှပ်၍ ညှစ်ပေးလိုက်သည်.net Page9.။ ခင်နွဲ့ရီ လက်တစ်ဖက်က ခင်မောင်လွင်၏ လီးကြီးကို ကိုင်၍ ဂွင်းတိုက်ပေးပြီး…ခင်မောင်လွင်၏ နှုတ်ခမ်းကို ဖိကပ်၍ စုပ်ပေးသည်..။ ခင်နွဲ့ရီ စိတ်ထဲ ဇေယျာက လွှမ်းမိုးနေသည်.ကောင်းလိုက်တာ…ကို http://achittatkatho.။ ``ကို…ရာ မချွတ်တော့ဘူးနော်…..
။ ခင်နွဲ့ရီ တစ်ကိုယ်လုံး ရွတက်လာသည်.net Page 10 ..။ ပြီးတော့ သူမ ခါးထိလှန်ထားသော ထဘီလေးကို ပြန်ဆွဲချရင်း အိပ်ယာပေါ် ပြန်၍ လှဲချလိုက်သည်...။ ပြီးလို့ မဖြစ်သေး…။ ခင်မောင်လွင်၏ လီးနဲ့ မပြီးချင်တာ စိတ်ထဲ စွဲနေသည်..။ ပြီးတော့ ခုတင် ခြေရင်းဖက်သို့ လာကာ ထဘီဟောင်းတစ်ထည်ဖြင့် သူမ၏ ပေါင်ကြားတွင် ပေကျံနေသည်များကို သုတ်သည်.။ လူတစ်ကိုယ်လုံး နွမ်းနယ်၍ နေသည်....အင်း..။ ထိုအခိုက်မှာပင် လမ်းဒေါင့်ဆီမှ ဂစ်တာတီးသံ ထွက်ပေါ်လာ၍ ခင်နွဲ့ရီ နားစွင့်မိလိုက်သည်...။ ခင်နွဲ့ရီ ပြီးချင်စိတ်ကို မနဲ အောင့်ထားလိုက်ရသည်.ဒီနားမှာ အပျိုလေးတွေ အများကြီး ရှိတာပဲ….အင်း…....ဒါ.အ…..။ ခင်နွဲ့ရီ အိပ်ယာပေါ်မှ အသာအယာထ၍ ခုတင်ပေါ်မှ ဆင်းလိုက်သည်.`` နားစွင့်နေရင်း လက်ထဲမှ ထဘီဖြင့် စောက်ဖုတ်ကို ဆက်၍ မသုတ်သေးပဲ အသာအုပ်ကိုင်ထားသည်..အို….။ ``လုပ်….`` အငမ်းမရပုံဖြင့် ညီးကာ ညှုသံလေး ပေးသည်.မြန်မြန်လေး…ဆောင့်…အား….သံယောဇဉ်…………`` ``ဟင်…ဒါ..။ မျက်လုံးအစုံကို မှိတ်ထားပြီး သူမစောက်ပတ်ထဲလိုးနေသော လီးက ခင်မောင်လွင်၏ လီးဖြစ်သော်လည်း သူမစိတ်ထဲ ညနေကတွေ့ခဲ့သော ဇေယျာ ၏ လီးဟု စိတ်ကူးယဉ်ကာ နေသည်.လုပ်..။ ခင်မောင်လွင် အသက်ရှူသံတွေ ပြင်းကာ နှာမှုတ်သံကြီးက တရှူးရှူး ဖြစ်လာသည်.ဇေယျာ့ အသံပဲ…ပတ်ဝန်းကျင်ကများ …..ကို ……ရီလေး ပြီးတော့မယ်….ချစ်…တယ်…သိပ်ချစ်တာပဲ…ဆောင့်..။ နားထောင်ရင်း နားထောင်ရင်းဖြင့် ဇေယျာ့ အသံမှန်းလဲ သိနေတော့ ခင်နွဲ့ရီ၏ စိတ်တွေက ကြွလာသည်..။ သူ့ကို မြန်မြန် ပြီးခိုင်းလိုက်မှ ဖြစ်မယ် လို့ တွေးလိုက်သည်...မမလှလှခပ်ရွရွ Typed by –Kaungmyattun99(အချစ်တက္ကသိုလ်) ရယ်…..။ အမြဲ ခံနေကျမို့ ခင်မောင်လွင် ပြီးကာနီးပြီကို ခင်နွဲ့ရီ သိလိုက်သည်.။ လီးတစ်ချောင်းလုံးဖြင့် အလိုးခံနေရမှတော့ ခင်နွဲ့ရီမှာလည်း ဖီလင်တွေ နဲ့ ဆိမ့်စပြုလာသည်.အမလေး…ကိုရယ်….။ ၁၀ မိနစ်လောက် ကြာတော့ ခင်မောင်လွင်ထံမှ ဟောက်သံက ထွက်လာသည်.။ ဂစ်တာသံနောက်မှ သီချင်းသံက ထွက်ပေါ်လာသည်...။ ပါးစပ်က မ သံလေး ပေးရင်း ခါးက ကော့ကော့တင်ပေးကာ စောက်ပတ်ထဲက လီးကို ညှစ်ညှစ်ပေးသည်..။ ခင်နွဲ့ရီ ပြီးချင်သော စိတ်ကို အတော်ပင် ချုပ်တည်း၍ ထားလိုက်ရသည်..။ စောစောက ခင်မောင်လွင် http://achittatkatho..ဆောင့်…..။ ``သံယောဇဉ်….. ။ ဒီနေရာတွင် ဂစ်တာတီးသံ တစ်ခါမှ မကြားဖူးခဲ့ပါ.။ ခင်မောင်လွင်၏ တရစပ် ဆောင့်ချက်တွေက ခုတင်ကြီး တစ်ခုလုံး တကျွိကျွိ မြည်နေသည်...။ ခင်မောင်လွင်က ခဏအကြာ ခင်နွဲ့ရီ၏ကိုယ်ပေါ်မှ ဆင်းပြီး ပက်လက်လှန်ချလိုက်တော့ ခင်နွဲ့ရီက ထထိုင်ပြီး ခင်မောင်လွင်ကို ပုဆိုး ပြန်စွပ်ပေးလိုက်သည်.`` အားသွန်၍ ဆောင့်လိုးလိုက်သော ခင်မောင်လွင်မှာ လီးကို စောက်ခေါင်းထဲ တဆုံးထိုးနှစ် စိုက်သွင်းလိုက်ပြီး သုတ်ရေများကို ပန်းထုတ်ပစ်လိုက်တော့သည်.
.။ ခင်နွဲ့ရီ အိပ်ယာပေါ်တွင် အသာလှဲ၍ ဇေယျာ၏ အသံကို နားစွင့်ရင်း ဖီးတက်နေမိသည်...ရယ်….သား…......။ ---------------×----------------------×---------------------------နောက်နေ့တွင် ခင်နွဲ့ရီသည် မနက်ပိုင်း ထဲက ဈေးသို့သွား၍ ညနေပိုင်းကျတော့ ပျံကျဈေးလေးကို မသွားတော့ပေ.....`` ခဏအတွင်း ခင်နွဲ့ရီတစ်ယောက် ပြီးချင်လာသည်..မမလှလှခပ်ရွရွ Typed by –Kaungmyattun99(အချစ်တက္ကသိုလ်) လိုးသဖြင့် ပြီးချင်ချင် ဖြစ်နေသော စိတ်က နဲနဲ ငြိမ်နေရာမှ ဟုန်းခနဲ ထ၍ လာသည်.ပြီး…တော့ မယ်…..။ မျက်လုံးထဲတွင်တော့ ညနေက မြင်ခဲ့ရသော ဇေယျာ့ လီးကြီးကို ပြန်မြင်ယောင်နေသည်.။ လက်ထဲမှ ထဘီလေးဖြင့် စောက်ပတ်ကို ဖိဖိပွတ်သည်.။ ညနေက မသောက်တာကြာပြီဖြစ်သော ခင်မောင်လွင်ကို ခင်နွဲ့ရီကပင် စကားစ၍ အရက်သောက်ဖြစ်အောင် ဆွယ်ကာ အမြည်းကောင်းကောင်း လုပ်ပေးကာ အရက်တိုက်ခဲ့သည်.။ သားနှင့် လင်ဖြစ်သူ ခင်မောင်လွင်တို့ အိပ်၍ သွားပြီ.။ နားက ဇေယျာ ၏ အသံကို အဆက်မပြတ် နားစွင့် ရင်း မှိတ်ထားသော မျက်လုံးထဲမှာ ဇေယျာ့ လီးကြီးကို မြင်ယောင်ကာ လက်ညှိုးလက်ခလယ် ပူး၍ စောက်ခေါင်းထဲ ထိုးသွင်း၍ ထုတ်ချီသွင်းချီဖြင့် ခပ်ကြမ်းကြမ်း ထိုးသည်.။ ``ယောက်ျားက အသံ…`` ဆိုသည့်အတိုင်း ခင်နွဲ့ရီ ဇေယျာ၏ အသံကိုကြားပြီး စိတ်တွေ ဟုန်းခနဲ နိုးထလာသည်.။ ည ၉ နာရီ ထိုးပြီ..။ ခင်နွဲ့ရီ သူမစိတ်ကို မထိန်းနိုင်တော့…။ မျက်လုံးဖွင့်၍ ခုတင်ပေါ် လှမ်းကြည့်လိုက်သည်.။ ပြီးတော့ လက်ထဲမှ ထဘီဟောင်းလေးကို ဘေးသို့ချလိုက်ပြီး လက်တစ်ဖက်ကို နောက်ပြန်ထောက်၍ ဖင်ကို ကြမ်းပြင်ပေါ် ထိုင်ချလိုက်သည်.net Page 11 ...။ ခင်နွဲ့ရီ အံလေး တစ်ချက်ကြိတ်ကာ ကြမ်းပြင်ပေါ် ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ချလိုက်သည်.။ စောက်စေ့လေးကို လက်ညှိုးထိပ်လေးနဲ့ ကလိသည်.။ တွေ့ချင်သော စိတ်က အဆမတန် ရင်ထဲတွင် ဖြစ်နေပေမယ့် ဒီစိတ်ကို အတင်းမျိုသိပ် ချုပ်တည်းထားပြီး ခင်နွဲ့ရီသည် ဇေယျာကို ရှောင်နေခဲ့သည်..ဇေယျာရယ်…..။ ပြီးမှ ပေါင်ကို ကားလိုက်ကာ မတရားဖောင်းတင်းလာသော စောက်ပတ်ကြီးကို လက်ဖြင့် အုပ်ကိုင်၍ ပွတ်သည်....။ ခင်မောင်လွင် ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ တစ်ရေး မနိုးနိုင်တော့…။ ခင်နွဲ့ရီ တွက်ထားသည့်အတိုင်း ည ၉ နာရီ ကျော်လျင် ဂစ်တာသံနှင့် ဇေယျာ့ သီချင်းသံက ထွက်ပေါ်လာသည်..။ ထို့ကြောင့် ဇေယျာနှင့် မတွေ့ရ.။ စောက်စေ့လေးကို လက်ညှိုးထိပ်ဖြင့် ကလိသည်.မမ.။ လက်ကို ခပ်ပြင်းပြင်း ခပ်သွက်သွက်လေး ထိုးထဲ့၍ လိုးသည်.။ ထဘီထဲ လက်ထည့်၍ စောက်ဖုတ်ကို ပွတ်သည်.။ အရသာတွေ့လာတော့ မျက်လုံးအစုံကို မှိတ်ရင်း ဇေယျာ၏ အသံကို နားစွင့်သည်...။ ``အင်း…ဟင်း….။ http://achittatkatho.အ…အား….။ ခင်မောင်လွင်က မှန်မှန်ကြီး ဟောက်၍ အိပ်ပျော်နေသည်..။ ခဏအတွင်း ခင်နွဲ့ရီ၏ စောက်ဖုတ်ကြီးက မတရားဖောင်း၍ ခုံးထလာပြီး စောက်ရည်ကြည်လေးတွေက စိုရွှဲ၍ လာသည်..`` ခင်နွဲ့ရီတစ်ယောက် မျက်နှာတစ်ခုလုံး ရှုံ့မဲ့၍ ဖင်ကြီးဆတ်ခနဲ ဆတ်ခနဲ ဖြစ်ကာ ပြီးသွားရတော့သည်...အ….။ ``ဇေယျာ….
net Page 12 .မမလို့ခေါ်တော့နော်…..`` ``အင်း……`` ``ကဲ…..မမလှလှခပ်ရွရွ Typed by –Kaungmyattun99(အချစ်တက္ကသိုလ်) ဇေယျာ ၏ အသံကို နားစွင့်ရင်း စောက်ဖုတ်ကို ကလိလိုက် နားလိုက်လုပ်ကာ အရသာခံနေလိုက်သည်..။ အိမ်က ပျက်စီးနေပြီ.။ ခင်နွဲ့ရီ ညဦးထဲက ခြံစည်ရိုးတံခါးကို စေ့ထားသည်.။ ခေါင်းရင်းဘက်ကအိမ်က လူမနေ..။ ကောင်လေးက ချက်ချင်းပင် မျက်နှာကို ထိုးအပ်ကာ နို့နှစ်လုံးကို ဆွဲစို့သည်.`` ခင်နွဲ့ရီသည် ဇေယျာကို အိမ်ဘေးသို့ ခေါ်လာသည်...။ ဇေယျာ မနေ့က သီချင်း သုံးပုဒ်ပြီးတော့ ပြန်သွားသည်.။ ဒီအခိုက်မှာပင် ဂစ်တာတီးပြီးသွားသော ဇေယျာက လှမ်း၍ အကြည့်ဖြင့် ဆုံသဖြင့် လက်ယပ်လှမ်းခေါ်လိုက်သည်…။ ခင်နွဲ့ရီတို့ အိမ်က ဒေါင့်အိမ် ..။ ဒီနေ့မီးပျက်သော ရက်.။ ခင်နွဲ့ရီမှာ ညအိပ်ရန်ဝတ်ထားသော ရှပ်အင်္ကျီလက်တိုကို ရင်ဘတ် ကျယ်သီးတွေဖြုတ်ပေးလိုက်သည်.ခုပဲ…တို့ကို မယားဖြစ်အောင် လုပ်တော့မှာမို့လား….။ အိမ်ရှေ့တွင် က ပန်းစိုက်ရောင်းသောခြံရှိသည်.။ သီချင်း သုံးပုဒ် ပြီးတော့မည်...။ ဒီနေ့တော့ ခင်နွဲ့ရီက ဇေယျာကို အတင်းကြုံး၍ ဖက်ထားမိသည်.။ လင်ဖြစ်သူ ခင်မောင်လွင့် ဟောက်သံကသာ အဆက်မပြတ် ထွက်နေသည်.။ စောက်ရေတွေကလည်း တစိမ့်စိမ့် ယိုစီးကျနေပြီ.....။ ဇေယျာ ဂစ်တာကိုင်၍ ခြံစည်းရိုးတံခါးကို တွန်းဝင်လာသည်.။ တဲသာသာ အိမ်လေး ဖြစ်၍ ခြံစည်းရိုးပင်တွေက တဲကိုပင် မမြင်ရ.....။ လမ်းတစ်ဖက်က အိမ်ကလည်း ဝေးသည်.။ ခင်နွဲ့ရီ ကပျာကယာ အိပ်ယာပေါ်မှထ၍ ခေါင်းဖီးပြီး မျက်နှာကို မိတ်ကပ်တို့လိုက်သည်.. http://achittatkatho...။ ဇေယျာက ခြံစည်းရိုးအတွင်းဖက်တွင် ဂစ်တာကို ထောင်ခဲ့ပြီး ခင်နွဲ့ရီဆီ လျှောက်လာသည်.။ ခင်နွဲ့ရီ အိမ်တံခါးကို ပြန်စေ့၍ အောက်သို့ ဆင်းလိုက်သည်.။ ပတ်ဝန်းကျင် တစ်ခုလုံး မှောင်မဲ တိတ်ဆိတ်နေပြီး ဘာလှုပ်ရှားမှုမှ မတွေ့ရ…။ ``အန်တီ့ကို သိပ်ချစ်တာပဲ…`` ``တို့လဲ သားကို ချစ်တယ်… အင်း…..။ ပြီးတော့ အိမ်ရှေ့ တံခါးကို အသာလေး ဖွင့်လိုက်သည်..။ ခင်နွဲ့ရီ အိမ်ပေါ်သို့ တစ်ချက်နားစွင့်ကြည့်သည်.။ ခင်နွဲ့ရီတို့ ခြံစည်းရိုးက လူတစ်ရပ်ကျော်လောက် ရှိသော ဝါးကပ်ခြံစည်းရိုး ဖြစ်သည်..ထွေးနေအောင် ဖက်ကာ နမ်းကြသည်.။ လူနေသည့်တဲက ဟိုတစ်ဖက်တွင် တော်တော်ဝေးသည်..။ နှစ်ယောက်သား ဆောင့်ကြောင့် ထိုင်ချလိုက်ပြီး.။ ခင်နွဲ့ရီ ရင်ဘတ်လေး ကော့၍ ကော့၍ ပေးပြီး နို့နှစ်လုံးကို ကလေးနို့တိုက်သလို လက်ဖြင့်မကိုင်ကာ တစ်လုံးပြီး တစ်လုံး အစို့ခံသည်.။ အိမ်ဘေး မြက်နုနုလေးများ ပေါက်နေသော နေရာရောက်တော့ ….မမလဲ.။ ခြေရင်းဘက်က လမ်း ..မောင်လေးလို့ခေါ်မယ်…သိလား….လာ…..။ ဘေးဘီသို့ မျက်လုံး ကစားကြည့်သည်.
။ ခင်နွဲ့ရီ ဘေးတွင် ဆောင့်ကြောင့် ထိုင်နေရာမှ ငုံ့၍ လီးကို လက်ဖဝါးလေးဖြင့် အသာကိုင်ကာ ငုံ့နမ်းသည်..ကောင်းလိုက်တာ….မောင်လေး….။ ဇေယျာ့ လီးကြီးက မတ်ခနဲ ထွက်၍လာသည်.။ ရမ္မက်ထန်သော မျက်လုံးအစုံဖြင့် ဇေယျာ၏ မျက်နှာချောချောလေးကို ကြည့်ကာ အားပါးတရ ဆောင့်၍လိုးသည်.....လုပ်ရအောင်နော်….`` http://achittatkatho.။ ပြီးတော့ နီရဲရွှမ်းစိုနေသော သူမနှုတ်ခမ်းလေးဖြင့် လီးဒစ်ကြီးကို ဖွဖွလေး စုပ်သည်...။ ``မောင်ရယ်….။ လက်တစ်ဖက်က တဆတ်ဆတ်ဖြစ်နေသော ဇေယျာ၏ လီးကြီးကို အသာထိမ်း၍ ဆုပ်ကိုင်ကာ စိုရွှဲနေသော သူမစောက်ပတ်ဝတွင် တေ့ကာ စောက်စေ့ထိပ်ကို လီးဒစ်ကြီးဖြင့် ပွတ်လိုက်ပြီးမှ အထဲသို့ဝင်အောင် ဖိချသွင်းယူလိုက်သည်.။ ခင်နွဲ့ရီ၏ စောက်ခေါင်းထဲတွင် အရည်တွေက မတရား ထွက်နေသဖြင့် တဘွတ်ဘွတ် အသံတွေက ထွက်ပေါ်၍ နေသည်.မမ…မနေနိုင်တော့ဘူး….။ လိုးနေပေမဲ့ ခင်နွဲ့ရီ မျက်လုံးကို မှိတ်မထားပါ.မမလှလှခပ်ရွရွ Typed by –Kaungmyattun99(အချစ်တက္ကသိုလ်) ``ဖင်ချပြီး ထိုင်လိုက်….။ ဇေယျာက လက်တစ်ဖက်ဖြင့် ခင်နွဲ့ရီ၏ နို့နှစ်လုံးကို တစ်လုံးပြီး တစ်လုံး ကိုင်သည်.......။ ဖြစ်ညှစ်သည်.။ လီးထိပ်တွင် စိမ့်ထွက်လာသော အရည်ကြည်လေးတွေက လီးတန်ကြီးပေါ်သို့ လိမ့်၍ ဆင်းလာသည်.နောက်ကို တံတောင်ဆစ်ထောက်ပြီး ကိုယ်ကို နဲနဲ လှဲလိုက်…ရပြီ…..အင်း……ဟင်း….။ ခင်နွဲ့ရီ အံတစ်ချက်ကြိတ်ခါ သူမ၏ ထဘီလေးကို မ၍ ဇေယျာ့ပေါင်ခွဆုံပေါ်သို့ ခွ၍ တက်လိုက်သည်.မောင်…..။ နို့သီးလေးတွေကို ချေပေးသည်.ကွယ်….။ အားရကျေနပ်သွားသော ပီတိအဟုန်က ခင်နွဲ့ရီ တစ်ကိုယ်လုံး ပျံ့နှံ့၍ သွားသည်..။ ခင်နွဲ့ရီ မမှီ မကမ်း ထိုအရည်ကြည်လေးတွေကို လိုက်၍ ယက်သည်.။ ``မမရယ်….။ ဇေယျာ တွန့်ခနဲ တွန့်ခနဲ ဖြစ်နေသည်.`` တုန်ခိုက်စွာ ငြီးသံလေးဖြင့် တစ်ချက်ပြောလိုက်ပြီး ဇေယျာ၏ မျက်နှာကို ကြည့်ကာ ပါးပြင်တစ်ဖက်ကို ရွှတ်ခနဲ နမ်းသည်.ဟင်း…ဟင်း….`` ခင်နွဲ့ရီ ဖင်ကိုကြွပြီး တစ်ချက်ချင်း လိုးသည်.။ ဇေယျာ၏ ဆီးခုံနှင့် သူမ၏ စောက်ပတ်ဝတို့ဖိကပ်၍ လီးတစ်ချောင်းလုံးကို စောက်ပတ်ထဲ သွင်းထားပြီး ဖင်ကို နှဲ့ကာ လှည့်ပေးသည်...။ ထို့နောက် လျှာကို တစ်လစ်လေး ထုတ်ကာ ယက်ရုံမျှ မက လုံးတစ်နေသော ဂွေးဥကြီးကိုပါ ငုံ့၍ နမ်းလိုက်ပြီး နှုတ်ခမ်းဖြင့် ငုံစုပ်လိုက် လျှာလေးဖြင့် ယက်ပေးလိုက် လုပ်နေသည်...။ ပြီးတော့ အမွှေးလေးတွေ ခပ်ပါးပါး ပေါက်နေသော ဇေယျာ၏ ဆီးခုံကိုပါ လျှာဖြင့် ယက်သည်.မောင်ရယ်….net Page 13 ..။ ခင်နွဲ့ရီ ပေါင်ခြံတစ်ခုလုံးလည်း စိုရွှဲလို့ နေပြီ… ``သိပ်ချစ်တာပဲ….အင်း…အောက်ကနေ ပင့်ပေး…..`` ခင်နွဲ့ရီ ဇေယျာ၏ ပုဆိုးခါးပုံစကို ဆွဲဖြုတ်ချလိုက်သည်...ဟုတ်ပြီ…....`` ``ခြေထောက်ဆင်း….ပင့်ပေးပါလား…မောင်….ဟင်းဟင်း….
။ ဇေယျာကလည်း အောက်က ပင့်တင်ကာ ဆောင့်ပေးသည်.`` ``ကောင်းပါတယ်…ကိုရဲ့…ရီလေး အသက်လဲ ပြန်ကြည့်အုံးလေ…၊ ၃၅ ထဲ ရောက်နေပြီ…ပြီးတော့ အိမ်ထောင်ကျတာလဲ ၁၃ နှစ်ထဲ ရောက်နေပြီဟာ….။ မကြာမီ ခင်နွဲ့ရီ တစ်ကိုယ်လုံး ဆိမ့်တက်လာသည်.။ ``အား….`` ဇေယျာထောက်ထားသော တံတောင်ဆစ်ကိုဖြုတ်၍ ကျောကို ချလိုက်တော့ ခင်နွဲ့ ရီက ဆောင့်ကြောင့်အနေအထားမှ ဒူးထောက်ချလိုက်ပြီး ဇေယျာ၏ အပေါ်သို့ မှောက်ချကာ ဖက်လိုက်ပြီး ဖင်ကြွ၍ ဆောင့်သည်.။ ---------------×---------------------------×-------------------ခင်နွဲ့ရီနှင့် ဇေယျာတို့ ညစဉ် ပုံစံမျိုးစုံ နှင့် တွေ့ခဲ့ လိုးခဲ့ကြသည်မှာ ကြာခဲ့ပြီ…။ အရက်ကို ကြိုက်သော်လည်း မိန်းမက တားသဖြင့် မသောက်ပဲ နေခဲ့ရသော ခင်မောင်လွင်မှာလည်း မိန်းမက လိုလိုလားလား ရှိသဖြင့် နေ့စဉ် သောက်ခဲ့သည်မှာ မျက်နှာပင် အမ်းတမ်းတမ်း ဖြစ်နေချေပြီ.။ ဇေယျာကလည်း မတတ်တတတ်နှင့် အောက်မှ ပင့်ဆောင့်ပေးသည်.။ လူပျိုပေမဲ့ ကြည့်ဖူးသော အခွေတွေက မနည်းတော့.မောင်ရယ်….အား…..။ ``ရီလေး တော်တော်လေး ကျသွားတယ်နော်… နေရော ကောင်းရဲ့လား….`` ``အင်း……......အင်း…….မမလှလှခပ်ရွရွ Typed by –Kaungmyattun99(အချစ်တက္ကသိုလ်) ရမ္မက်တွေ ဆူဝေလာတော့ ခင်နွဲ့ရီ အားမရနိုင် ဖြစ်လာရသည်..။ ပြူတင်းပေါက် ကို မျက်နှာပေး၍ ရပ်နေသော ခင်နွဲ့ရီ၏ နောက်သို့ ခင်မောင်လွင် က တိုးကပ်လိုက်ပြီး သူမ၏ တင်သားအစုံကို လက်ဖဝါးနှစ်ဖက်ဖြင့် ကိုင်လိုက်သည်.မောင်…...။ သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် လွတ်ထွက်သွားမှာ စိုးသည့်အလား အတင်းဖက်၍ အငမ်းမရ နမ်းလိုက်ကြပါတော့သည်...`` http://achittatkatho...မမ ပြီး……အား…..။ ``ကျောချပြီး လှဲလိုက်….ပြီး ပြီ….။ စောက်ခေါင်းထဲတွင် လီးကချောင်သလို ဖြစ်နေပေမယ့် ခင်နွဲ့ရီ အတော်ပင် ကျေနပ်အားရဖြစ်နေမိသည်.net Page 14 .`` ``ပြီးတော့ ရီလေးက ဟိုကိစ္စကို သိပ်ပြီး စိတ်မသန်လို့ ဒီလောက် တင်နေတာ…ဟုတ်ဖူးလား….အား……..`` နှစ်ယောက်စလုံး ပြိုင်တူပြီးကာ အရည်များ အိုင်ထွန်းသွားသည်.ကိုရဲ့….`` ``အ…မမ….
။ ×××××××××××××××××××----------------××××××××××××××××× ပြီးပါပြီ…..မမလှလှခပ်ရွရွ Typed by –Kaungmyattun99(အချစ်တက္ကသိုလ်) ဟုတ်ဖူးလား ဟု ပြီတီတီလေး လှည့်ပြောလိုက်သော ခင်နွဲ့ရီ၏ ပါးလေး တစ်ဖက်အား ခင်မောင်လွင်က ရွှတ်ခနဲ နေအောင် နမ်းလိုက်ပါတော့သည်.net Page 15 .။ http://achittatkatho.
Documents Similar To Ma Ma Hla Hla Khat Ywa Ywa
Victoria Beckham Bob HaircutUploaded by Pauu Paulinash
Balance MetalurgicoUploaded by michael alanya
Sindicalización CASUploaded by cmesones
REGISTRO2DE JOSÉ EMIR.docxUploaded by JUANJOSE37